ntoni: uMartin Vrijland
Ngokuthe ngcembe, abantu abaninzi ngakumbi bayaqala ukubona ukuba oorhulumente kwihlabathi liphela bafuna ukwenza utshintsho oluzinzileyo kuluntu luphela. "Isitshixo esiqondayo" ngokuthe ngcembe siyaguqulwa sibe yinto esisigxina, apho kuya kufuneka uyithengise kwakhona inkululeko yakho. Into eqhelekileyo iba yimitha nesiqingatha soluntu kwaye kuya kufuneka uzihlawulele ngokwakho. Unokuqesha abacebisi ababizayo ukuba [...]
Ugqirha wezengqondo waseSwitzerland uKarl Jung wathi, "Oko kunika ingqalelo kuyakhula." Ngoku unokubuza ukuba ngaba lo ngumthetho wendalo oqinisekisiweyo, kuba uyibonisa njani into enjalo ngokwenzululwazi? Ngoku sisetyenziselwe ukumamela 'iingcali' kwaye sikwacinga ukuba kunolwazi oluninzi kangangokuba kunzima ukufumana ukuba […]
Yintoni i-matrix kwaye kutheni kubalulekile ukuyibona?
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	3 Juni 2015	• 3 Comments
Isiqendu esaziwayo esivela kuMorpheus esivela kwi-movie 'The Matrix' yile: "I-Matrix yinkqubo, i-Neo. Le ndlela intshaba yethu. Kodwa xa ungaphakathi, ukhangelelene, ubona ntoni? Abashishini, ootitshala, amagqwetha, abachweli. Zona ziingcinga zabantu esizama ukuzisindisa. Kodwa de senza, aba bantu [...]
Utyelelo lulonke: 2.456.005